Egwuregwu ụmụ nwanyị - Usoro nkwekọrịta maka ụkpụrụ ahụike ahụike - Prọfesọ Dianna Kenny | Ebumnuche (Njikọ Aka Na-emegide Mmụta Mmekọahụ)
Ntinye ihe egwuregwu ndi nwanyi na nkwuputa nwoke na nwanyi: colọ nkuzi maka usoro ahụike.
N'afọ iri gara aga, ndị isi egwuregwu asọpụrụ Semenya nyocha nyocha anụ ahụ na nke uche ugboro ugboro, gbochiri ya ịsọ asọmpi, kwere ka ọ laghachi asọmpi, wepụta iwu ọhụrụ ndị nwara ịhazi ahụike ya na ọgụ na-alụ ọgụ iji kwado iwu ndị ahụ n'ụlọ ikpe.
Semenya nọgidere na-eme nke ọma na emume 800m, mgbe e nyere ya ohere ịsọ asọmpi, wee merie asọmpi ụwa ọzọ na 2017 yana ọla edo na egwuregwu 2012 na 2016. Ọnụnọ nke ndị egwuregwu dị ka Semenya, nke ihe ndị mejupụtara ndu ya bụ ihe mepụtara na-akpata mgbagwoju anya ọgwụ na usoro omume maka ndị isi egwuregwu. Na mgbakwunye, na mkpa nke akwụkwọ a, bụ ihe mgbagha ọnọdụ nke ndị na-achịkwa achịkwa na-ebute mmalite nke testosterone na homonụ nwoke na nwanyị ndị ọzọ, omume ugbu a na-emetụta ụmụaka na ụmụ nwoke dysphoric okike.
Na Eprel 2018 ka IAAF (International Association of Athletics Federation) webatara iwu ntozu ohuru maka nhazi ọkwa nke nwanyi antụpọ nwere ọdịiche (Nsogbu) nke Mmekọ Mmekọahụ (DSD), gụnyere hyperandrogenism, akọwapụtara dị ka ndị nwere ọkwa testosterone na-ekesa nke ise (5) nmol / L ma ọ bụ ndị nwere androgen, maka ihe omume gụnyere 400m ruo otu kilomita. agbụrụ na ihe omume jikọtara ọnụ na otu ụzọ ahụ ('Ihe amachibidoro ihe omume').
Iwu ahụ chọrọ ka ndị egwuregwu dị otú a mezuo usoro atọ iji ruo eru maka ịsọ mpi na Ihe Ndị E Nwere Na Mgbakọ Mba Nile. Ha ga:
(a) ka amata na iwu dịka nwanyị ma ọ bụ dị ka intersex (ma ọ bụ ihe kwekọrọ);
(b) belata ọkwa testosterone ọbara ha dị n'okpuru nmol / L nke ise (5) nke na-aga n’ihu ma ọ dịkarịa ala ọnwa isii (dịka, site n’iji ọgwụ mgbochi homonụ); na
(c) debe ọkwa testosterone ọbara ha dị n'okpuru nmol / L ugboro ise (5) nmol / L (ọ bụrụ na ha nọ ma ọ bụ na-asọ asọmpi) ruo oge niile ha chọrọ ịnọgide na-eru eru maka ịsọ asọmpi.
IAAF President Sebastian Coe kwuru na ụkpụrụ ndị ahụ dị mkpa
… Hụ na a na-egwu egwuregwu dị larịị… testosterone, nke ekepụtara ma ọ bụ nke etinyere ya na ahụ, na-enye uru dị egwu na ndị egwuregwu nwanyị. Iwu edegharịrị abụghị banyere aghụghọ, ọ dịghị onye na-eme egwuregwu nwere DSD ghọgburu, ha bụ maka ịhazi ọkwa egwuregwu iji hụ na asọmpi ziri ezi na nke bara uru na asọmpi ebe a na-ekpebi ihe ịga nke ọma site na talent, nraranye na ịrụsi ọrụ ike karịa ihe ndị ọzọ na-enye aka. . ”
Imirikiti ụmụ nwanyị, gụnyere ụmụ nwanyị na-egwu egwuregwu, nwere testosterone dị ala dị ala n'ahụ ha (0.12 ruo 1.79 nmol / L n'ọbara); mgbe nwoke gbasachara ntozu oke nwoke bụ 7.7 - 29.4 nmol / L. Ọ dịghị nwa nwanyị ga-enwe ọkwa ọbara nke testosterone eke na 5 nmol / L ma ọ bụ karịa belụsọ na ha nwere DSD ma ọ bụ akpụ. Ndị nwere DSD nwere ike ịnwe nnukwu testosterone dị elu, na-agbatị na karịa karịa nke ụmụ nwoke.
Ọ dị elu nke testosterone endogenous na-emegharị n'ime ndị na-eme egwuregwu nwere ụfọdụ DSDs nwere ike ime ka egwuregwu ha dịkwuo elu. Iwu ndị a na-ekwe ka ndị egwuregwu dị otú a soro n'asọmpi ụmụ nwanyị n'ihe omume ndị a na-egosi ugbu a na-emetụta nke ọma naanị ma ọ bụrụ na ha dabara ọnọdụ ndị iwu ahụ kwuru.
Banyere asaa n'ime 1000 gbụrụ nwanyị na-eme egwuregwu enweela ọkwa testosterone dị elu, ihe ka ọtụtụ n'ime ha na-asọ mpi n'ihe omume amachibidoro. Ọnụego a bụ oge 140 karịa ọnụego ọnụ ọgụgụ ụmụ nwanyị niile. Ọgwụ ya na iji ọgwụ mgbochi ọgwụ.
Athletesmụ nwanyị ndị na-eme egwuregwu na-achọghị iweda ọkwa testosterone ha ka ga-eru eru ịsọ mpi na:
(a) nhazi ọkwa nwanyi:
(i) n'asọmpi ndị na-abụghị asọmpi mba ọzọ: na egwu niile, ihe omume egwuregwu, yana ihe omume agbakọ, gụnyere ihe amachiri; na
(ii) n'asọmpi mba ụwa: na egwu niile, ihe omume obodo, yana ihe ndị ọzọ ejikọtara, na-abụghị ihe ndị amachiri; ma obu
(b) na nhazi nwoke, na asọmpi niile (ma asọmpi nke mba ọzọ ma ọ bụ na ọ bụghị), na ihe omume niile, ihe omume mpaghara, yana ihe omume niile ejikọtara; ma obu
(c) na ntinye ma ọ bụ nhazi ọ bụla nwere ike inye, na asọmpi niile (ma asọmpi mba ọzọ ma ọ bụ na ọ bụghị), na ihe omume niile, emume egwuregwu, na ihe omume ndị jikọtara ọnụ, gụnyere ihe ndị amachiri.
Iwu a, a na-azọrọ, dị iji hụ na asọmpi ziri ezi na nke bara uru n'ime nhazi ụmụ nwanyị, maka ọdịmma ụmụ nwanyị niile. Dị ka onye mechara chee, ndị IAAF kwuru na ha anaghị ajụ ajụjụ gbasara nwoke na-eme egwuregwu na-enwe mmekọ nwoke na nwoke.
A kọwapụtara Doping, nke akụkọ ihe mere eme bụ nnukwu ihe ịma aka maka iguzosi ike n'ezi ihe nke asọmpi egwuregwu, na 1999 Nkwupụta Lausanne na Doping na Sport dị ka “iji aka eme ihe, ma ọ bụ ihe ọ bụ ma ọ bụ usoro, nwere ike ibute ahụike ndị egwuregwu na / ma ọ bụ nwee ike ịkwalite arụmọrụ ha, ma ọ bụ ọnụnọ nke ahụ na-eme egwuregwu, ma ọ bụ nyocha nke iji ihe [amachibidoro] usoro. ”
Kemgbe iwebata ụmụ nwanyị n'ime asọmpi egwuregwu nke ndị ama ama na 1900, egwu abụọ ọzọ na-emebi iguzosi ike n'ezi ihe nke egwuregwu amalitela: wayo mmekọahụ na transsexualism na egwuregwu. N’ụzọ na-eju anya, nchọpụta nke ụfọdụ ụmụ nwoke na-eme egwuregwu “mere ka ụmụ nwanyị” wee pụta n’egwuregwu Olympic 1936 mere ka ndị IAAF were oke oke nke chọrọ ka ụmụ nwanyị niile sonye na asọmpi egwuregwu mba Europe na 1966 N ’agbadoro ọtọ n'ihu ndị otu dọkịta iji gosipụta na ha bụ nwanyị.. Na 1968, IOC (Kọmitii Olympic International) chọrọ ihe akaebe banyere okike tupu ụmụ nwanyị na-eme egwuregwu nwere ike isonye na Olympics Mexico.
Nnwale nke nwoke na nwanyị kwụsịrị na Olympic Sydney na 2000. Edebara ọtụtụ ihe, gụnyere ọdịda nke ule nyocha, ejighị n'aka banyere otu esi ejikwa ndị egwuregwu intersex na ndị amụrụ na mkpụrụ ndụ ihe na-adịghị ahụkebe dị ka hyperplasia hyrenplasia, 5-alpha-steroid-mbelata oke, akụkụ dị ala ma ọ bụ zuru ezu androgen insensitivity, moromos chromosomal, nka na ihe ojoo nke ndi choputara na ha nwere DSD site na nnwale, na enweghi ike igosiputa na ndi n’egwuregwu di otu a n’ezie nwere uru dike.
Ugbu a, ka anyị laghachi Caster Semenya. N’agbata 2011 na 2015, Caster weere ọgwụ mgbochi iji belata ọkwa testosterone ya. N'ime oge a, oge ya maka mita 800 ji nwayọ nwayọ n’etiti otu sekọnd abụọ mana ọ ka jisiri ike merie ọla edo n’egwuregwu Olympic 2012. Ka o sina dị, ndị otu iwu ya rụrụ ụka, dabere n'echiche ndị ọkachamara, nke ahụ bụ Semenya iji belata ọkwa testosterone ya kpamkpam, ọ ga-agba ọsọ nke 800 asaa asaa karịa oge emeri emeri ya ugbu a nke ga-etinye n'èzí asọmpi maka ihe nrite ma ọ bụ ndekọ ụwa.
Na Febụwarị 2019, Caster kpọgara IAAF n'ụlọ ikpe mkpegharị na egwuregwu (CAS) n'ihi ịkpa oke, na-arịọ ka Iwu DSD, nke na-emetụta naanị ụmụ nwanyị na-eme egwuregwu bụ ụmụ nwanyị iwu, nwere 46XY, DSD, na nnwale, bụ ndị nwere mmetụta androgen na-ekesa testosterone karịa 5nmol / liter bụ onye ekwuputaghị na ọ nweghị isi. (Mara: Iwu anaghị emetụta ụmụ nwanyị na-eme egwuregwu nwere chromosom 46XX, ọbụlagodi ma ha nwere ọkwa testosterone dị elu). Na CAS chịrị na Iwu DSD… bụ nke ịkpa oke mana… ịkpa oke dị otu a… bụ ụzọ dị mkpa, ezi uche na nke bara uru iji mezuo ebumnuche IAAF nke ichebe ụmụ nwanyị n'egwuregwu ndị a machibidoro.
ASlọ ọrụ CAS kwadobere ihe IAAF chọrọ ka ụmụ nwanyị ndị na-eme egwuregwu nwere testosterone ngafe gbadata belata ọkwa ha iji wee asọmpi. Ndị ọka iwu Semenya kwuru na ihe ndị IAAF chọrọ maka ndị egwuregwu Ndị DSD iji were ọgwụ mgbochi iji belata testosterone bụ ihe na-ezighi ezi ma nwee ike ibute ọrịa. Kedu ihe kpatara na ọ bụghị ihe omume dị njọ ma bụrụ ihe dị ize ndụ iji belata testosterone na ụmụ nwoke na-eto eto dysphoric nwoke na nwanyị.
Julian Savulescu, prọfesọ na Biomedical Ethics, akọwapụtara Ntụpọ ụkpụrụ omume nke 10 Mkpebi banyere Caster Semenya na-arụ ụka na agbanyeghị na Caster bụ intersex, ọ bụ nwanyị site na njirimara okike ya. Ebe ọ bụ na ahụike, echiche mmadụ na nke iwu kwadoro ugbu a na-akwado ndochi nke mkpebi nwoke na nwanyị ịchọpụta nke nwoke na nwanyị na mpaghara, na-eji echiche ndị dị etu a na-aga n'ihu na iwu, gịnị kpatara na ụkpụrụ a anaghị emetụta ndị egwuregwu egwuregwu ma ọ bụ ndị na-eme egwuregwu na-anaghị ezukọta n'ụzọ ọzọ ihe umu nwanyi banyere nwanyi?
Ndị otu mba ụwa jikọrọ rụrụ ụka na ọchịchị IAAF megidere ikike mmadụ. Medicaltù Ahụ Ike (wa (WMA) nwekwara katọrọ usoro iwu IAAF na-arụ ụka na ọ bụ ihe ezi uche dị na ya maka ndị dibịa ịkọpụta ọgwụgwọ maka testosterone endogenous ọ bụrụ na ọnọdụ ahụ abụghị ọrịa. WMA gbaghaara ma izi ezi nke sayensị a bịara, na-ekwu na ọ dabere na akaebe adịghị ike site n'otu ọmụmụ.
WMA na-akpọ ndị dọkịta ka ha guzogide ma jụ ime nyocha ọ bụla ma ọ bụ na-enye ọgwụgwọ ọ bụla ma ọ bụ ọgwụ ọ bụla ... nke nwere ike imerụ ndị na-eme egwuregwu ahụ ume, ọkachasị iji mmegharị ọbara, biochemistry ma ọ bụ testosterone endogenous.
Nke a bụ ọmarịcha ọnọdụ enyere na WMA anaghị akatọ ọgwụ nke testosterone maka ụmụ agbọghọ na-ekwupụta na ha bụ ụmụ nwoke ma ọ bụ iji belata testosterone na ụmụ nwoke na-ekwupụta na ha bụ ụmụ nwanyị. Ha anaghị a atụ mmanya na iwepụ ara na ahụ ike ma ọ bụ akụkụ ọmụmụ nke ụmụ agbọghọ nwere ahụ ike ma ọ bụ bepụ ụmụ nwoke mara mma. Na WMA weputara setị itoolu na-atụ aro na 2015 nke ahụ hoo haa na-anabatacha ọgwụgwọ niile enyerela maka ịlụ nwoke, tinyere homonụ nwoke na nwanyị na ntụgharị nke ịgha ahụ maka ndị mmadụ na-arịọ ha, jiri naanị proviso na ha na-enye nkwenye anya, na-akọwaghị etu esi achọpụta nkwenye nkwenye, ọkachasị na ndị na-eto eto. Na Ogige ezinụlọ nke Australia ewepụghị ọrụ ọnụ ụzọ ámá ya gbasara ịwa ahụ mgbe enwere nkwekọrịta n'etiti ndị nne na nna na ndị dọkịta. Na mgbakwunye, enwere ugbua mbanye na belata afọ nkwenye na igbochi ọrụ nke nkwenye nne na nna maka usoro ndị a.
Enwere ihe mgbochi nchebe maka ụmụaka na ndị na-eto eto na-abanye a tonillectomy e jiri ya tụnyere mastectomy abụọ nke ara nwere ahụ ike. N'izugbe, Iwu Australia na-ekele ndị nne na nna nke ụmụaka na-erubeghị afọ 18 maka ọrụ nkwenye na usoro ọgwụgwọ. N'ọnọdụ ebe ụmụaka na-eru nso afọ 18, a na-ahapụ ha ka ha nye onwe ha nkwenye ma ọ bụrụ na dọkịta kwenyere na ha
"... ghọtara nke ọma ndụmọdụ ahụike a na-enye, ọdịdị, nsonaazụ na nsonaazụ nke ọgwụgwọ a chọrọ, ihe ọghọm ahụike ahụ, mmetụta mmetụta nke ma ịnabata ma ọ bụ ịjụ ọgwụgwọ ahụ, na ajụjụ gbasara omume na ezinụlọ metụtara."
Ọrụ nyocha ya na ụmụ agbọghọ nọ na-akawanye dysphoric okike na-atụ aro na ohere a maka ike adịchaghị iru. Achọpụtala m na ndị na-eto eto dị otú a na-akpachara anya maka nsonaazụ ga-adịte aka nke ịlaghachi maka nwoke na nwanyị, gụnyere amụghị nwa, iribii mmekọahụ, na ihe egwu ahụike siri ike. Enweela m ụmụ 14 dị afọ na-agwa m na ọ dịghị mgbe ha chọrọ ịmụ ụmụ n'ihi na ha achọghị ịma banyere ịmụ nwa na ọ ga-esiri ha ike ịhọrọ nke ichekwa ndu. Ebe ọ bụ na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ndị nọ n'ọnọdụ m enwetabeghị mmekọahụ, ha na-echezi echiche onwe ha banyere enweghị mmasị na ọrụ mmekọahụ. Ọzọkwa, ndị na-eto eto na-agagharị agagharị kọrọ na enweghị data na nsonaazụ ogologo oge nke mgbaka enweghi ihe omuma banyere ihe ogba aghara imeju n’oge uto anaghị egbochi ha ịga n'ihu n'ụzọ ntụgharị. Ihe ndị a na-eduga n'inwe nchegbu dị ukwuu banyere ikike maka nkwenye nkwenye n'ime ndị a na-eto eto.
Egwuregwu egwuregwu abụrụla otu n'ime ebe ole na ole fọdụrụnụ ebe eziokwu nke mmekọ nwoke na nwanyị si bụrụ ihe ndabere maka arụmụka ezi uche dị na ya, iwu na omume. Akwụkwọ akụkọ sayensị na-akwanyere ùgwù dịka American Scientific na-azọrọ na “[b] ndị ọkà mmụta sayensị amụ ugbu a na-eche na ụdị dị iche iche karịrị nke nwanyị na nwoke na-edina ụmụ nwoke.” N'otu aka ahụ, Journal ahụ. Nature n’oge na-adịbeghị anya katọrọ atụmatụ ịlaghachi na omume nkewa ndị mmadụ na mgbakwasị ụkwụ ma ọ bụ mkpụrụ ndụ ihe nketa. Nkwupụta ndị a dabere na nsogbu ndị a na-adịghị ahụkebe nke mmepe mmekọahụ nke chromosom na nwoke na nwanyị na / ma ọ bụ akụkụ nwoke na nwanyị nọ na otu onye. Ejirila ọnọdụ ndị a mee ihe n'echeghị ikpe maka "ụdị nwoke" ebe a na-adabere n'otu oge na echiche nke nwoke na nwanyị iji mee nke a. Na Intersex Society nke North America juputara kpam kpam ụdị arụmụka a, na-ekwupụta nke ahụ
"... ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ndị nwere ọnọdụ intersex na - achọpụta dị ka nwoke ma ọ bụ nwanyị ... Ya mere, ebe mmadụ niile na - achọpụta dị ka transgender ma ọ bụ transsexual nwere nsogbu na njirimara nwoke na nwanyị, ọ bụ naanị obere akụkụ nke intersex na - enwe nsogbu ndị a."
Ka o sina dị, na American Academy of Pediatrics dụọ ndị dibịa ọdụ ka ha na-emeso ụmụaka dịka okike ha si dị, na-agbanyeghị (ụdị mmekọahụ) ma ọ bụ mkpụrụ ndụ ihe nketa. N'agha ụka, nke Nettie oru ngo kwuputara nke ahu
Mgbalị ịnwe mmekọahụ nke ndụ dị ka ihe mmekọrịta ọha na eze, nke ga-abụzi okwu nke njirimara nke mmadụ, bụ echiche zuru oke, sayensị na ezighi ezi na enweghị ọrụ mmekọrịta.
Enwere ntụpọ dị egwu na nke na-egbu egbu na ntụpọ na arụmụka nke arụmụka maka arụmụka nwoke na nwanyị na ịdị omimi nke nwoke ma ọ bụ nwanyị na-akpabeghị okwu n'ọnụ ụzọ transgender. Transgender ontology emeela ọgwụ transgender, bụ nke nwetagoro azụ na emezughị ya iji nwude mkpochapu nke mmekọahụ sitere na echiche transgender. Ejiri anyi n’echiche na ihe kwesiri ekwesi nke mmekorita nwoke na nwanyi bu njiri mara nwoke, ya bu na egosi chromosom, DNA, homonụ nke nwanyi, udiri nwoke na nwanyi na udiri nwoke na nwanyi n’enweghi ebe ha no.